दरबारमार्गमा यस्तो अवस्थामा भेटिइन् सृष्टि ! « Ramailo छ
दरबारमार्गमा यस्तो अवस्थामा भेटिइन् सृष्टि !
प्रकाशित मिति : Jun 15, 2017
समय : 11:06 pm
नायिका सृष्टि श्रेष्ठ खैनी, तमाखु र सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्दिनन् । तर बिहिबार भने सृष्टि दरबारमार्गस्थित डेजाबु बारमा चुरोट चान्दै थिइन् । डेजाबुमा सृष्टि एक्लै थिइनन्, सय बढी अन्य युवायुवतीमा पनि आफ्नै मुडमा मस्ती गर्दै थिए ।
यी दृश्यहरु थिए, फिल्म लाउरेको । फिल्ममा सृष्टि विन्दास युवतीको भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छिन् । फिल्ममा सृष्टि र गायक नरेन लिम्बु मुख्य भूमिकामा छन् । निगम श्रेष्ठले निर्देशन गर्दै गरेको फिल्मको केही दिनदेखि राजधानीका विभिन्न स्थानहरुमा छायाँकन भैरहेको छ ।
सुनिल रावल, ईश्वर श्रेष्ठ, सुवास लामिछाने र वियशराज श्रेष्ठको संयुक्त निर्माण रहेको फिल्म लाउरेका कार्यकारी निर्माता बुद्धिलाल मगर हुन् । सुनिल रावलले बनाएको सायद २ असार ३० गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।